Imigaqo yokuziphatha yokuhlela | Iifowuni ze-Android | I-Androidsis
Ubungqongqo kunye nokwenza izinto elubala.
Umgaqo-nkqubo wethu wokuhlela usekwe kumanqaku e-7 aqinisekisa ukuba yonke imixholo yethu iya kuba ngqongqo, ithembeke, ithembeke kwaye ibonakale.
Sifuna ukuba kube lula kuwe ukuba uyazi obhala ntoni kwindalo esingqongileyo nakulwazi lwethu Kufuneka uyenze.
Sifuna uyazi imithombo yethu, siphefumlelwe ngubani kunye neendlela nezixhobo esizisebenzisayo.
Sisebenza ukwenza konke oku kwenzeke ngokunika abafundi ithuba lokuba basazise ngazo naziphi na iimpazamo abazifumanayo kunye nolunye uphuculo abafuna ukulucebisa.
Kwi-intanethi ene-infoxication sifo, kubaluleke kakhulu ngakumbi ukuba sikwazi ukwahlula phakathi kweendaba ezinokuthenjwa nezingathembekanga.
Sisekela imigaqo-nkqubo yethu yokuhlela kumanqaku ayi-7, esiya kuthi siphuhlise apha ngezantsi:
1 Ukunyaniseka kolwazi
2 Abahleli abakhethekileyo
3 Umxholo wokuqala
4 Hayi kwi-Clickbait
5 Umgangatho kunye nokugqwesa komxholo
6 Ukulungiswa kweempazamo
7 Uphuculo oluqhubekayo
Lonke ulwazi esilupapashayo iqinisekisiwe ukuqinisekisa ukuba iyinyani. Ukufezekisa le njongo, sizama ukubhala uxwebhu ngemithombo ephambili, ekugxilwe kuyo ezindabeni, kwaye ke siphephe ukungaqondani okanye ukutolikwa okungalunganga kolwazi.
Asinanxaxheba kwezopolitiko okanye kwezorhwebo kwaye sibhala sithathe icala, sizama ukuba njalo ngenjongo ezinokwenzeka xa uhambisa iindaba kunye nokunikezela ngobuchule bethu kuphononongo lweemveliso kunye nothelekiso.
Umhleli ngamnye uyazi ngokugqibeleleyo umxholo asebenza kuwo. Sisebenzisana neengcali kwicandelo ngalinye. Abantu ababonisa yonke imihla ukuba banolwazi olukhulu kwisifundo ababhala ngaso. Ukuze ubazi, sishiya ulwazi malunga nabo kunye nokunxibelelana neeprofayili zabo zentlalo kunye ne-biography.
Yonke imixholo esiyipapashayo yeyokuqala. Asikhupheli okanye siguqulele kwezinye iindaba. Sinxibelelana nemithombo ehambelanayo ukuba siyisebenzisile, kwaye sikhankanya abanini bemifanekiso, imithombo yeendaba kunye nezixhobo esizisebenzisayo ukunika olona lwazi luchanekileyo, sinika igunya elifanelekileyo.
Asizisebenzisi izihloko ezibubuxoki okanye ezithandekayo ukuze sitsalane nomfundi ngaphandle kokuba iindaba zingenzi nto. Singqongqo kwaye sinyanisile, kunjalo izihloko zamanqaku ethu ziyahambelana noko uza kufumana kumxholo wethu. Asivelisi ulindelo malunga nomxholo ongekho emzimbeni weendaba.
Umgangatho kunye nokugqwesa komxholo
Senza amanqaku asemgangathweni kunye nomxholo kwaye sihlala sifuna ukugqwesa kuyo. Ukuzama ukukhathalela zonke iinkcukacha kwaye usondeze umfundi kufutshane nolwazi abalukhangelayo nabaludingayo.
Nanini na xa sifumana impazamo okanye sinxibelelana nathi, siyijonga kwakhona kwaye siyilungise. Sinenkqubo yangaphakathi yolawulo lwempazamo esinceda ukuba sihlale sigqibezela amanqaku ethu, kunye nokuthintela ukuba zingaphinde zenzeke kwixesha elizayo.
Sisoloko siphucula umxholo kwiindawo zethu. Kwelinye icala, ukulungisa iimpazamo kwaye kwelinye icala, ukwandisa ii-tutorials kunye nomxholo ongapheliyo. Enkosi ngalo mkhuba, wonke umxholo wewebhu uguqulwa ube sisalathiso kunye nomxholo oluncedo kubo bonke abafundi, ngalo lonke ixesha ufundwa.
Ukuba unesikhalazo okanye ingcebiso malunga nenqaku okanye umbhali, siyakumema ukuba usebenzise eyethu Unxibelelwano.